tsy fisian'ny antony manosika - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Keyword: tsy fisian'ny antony manosika
Ora fialantsasatra manokana amin'ny Internet, fiantsenana an-tserasera, resaka an-telefaona lava amin'ny telefaona ary miaraka amin'ireo mpiara-miasa na fivoriana misy pseudo miaraka amin'ny mpiara-miasa. Izay raha vao jerena dia toa manintona sy toy ny asa lehibe isan'andro, raha ny tena izy dia tsy misy ifandraisany amin'ny andro iray feno.
Fiterahana: Adin-tsaina ateraky ny fahasosorana
Miaraka amin'ny ampahefatry ny mpiasa rehetra, ny fiainana miasa isan'andro dia voafaritry ny fahasosorana, tsy ampy ny fitakiana ary ny tsy fahalianan'ny olona liana.
Fiterahana - fihenjanana ateraky ny fahasosorana - Sary avy amin'i Vendula Kociánová avy amin'i pixel
Miresaka ilay antsoina hoe "Boreout Syndrome" ireo dokotera. Zava-misy izay miteraka olana maro amin'ny mpiasa ary matetika dia lafo loatra amin'ny mpampiasa.
Inona marina no atao hoe boreout?
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia mitaraina noho ny adin-tsaina sy ny fitakiana be loatra any am-piasana. Betsaka ny mpiasa no tsaboina matetika noho ny fandoroana azy.
"Fiterahana - fihenjanana ateraky ny fahasosorana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 28. Desambra 2020 28. Desambra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Boreout, tsy fisian'ny antony manosika, noloahany, fahasorenana, Fahantrana any am-piasana, listlessness, Adin-tsaina noho ny fahasosoranaLeave a Comment ny niteraka - ny adin-tsaina ateraky ny fahasosorana